You na-enweta ndụmọdụ ọjọọ site na ndị na-eduzi ahịa? | Martech Zone
Ma eleghị anya, m na na na ahịa egwuregwu kwa ogologo. Ọ dị ka oge m na-etinye na ụlọ ọrụ a, ọ bụ mmadụ ole na ole m na-asọpụrụ ma ọ bụ na-ege ntị. Nke a apụtaghị na enweghị m ndị ahụ m na-asọpụrụ, ọ bụ naanị na ọtụtụ ndị na-ejide ọkụ na-akụda m mmụọ.
Kpachara anya maka ndị amụma ụgha, ndị na-abịakwute gị na uwe atụrụ, mana n'ime ha bụ nkịta ọhịa agụụ na-agụ. Matt. 7: 15
Enwere ihe ole na ole…
Nnukwu ikwu okwu na ịre ahịa dị ukwuu bụ onyinye pụrụ iche
Enwere m mmasị ikwu okwu n'ihu ọha ma ana m agbalị ịpụ ugboro ole na ole n'ọnwa ikwu okwu. Ana m akwụ ụgwọ ụgwọ ikwu okwu iji kpuchie oge m na-arụ ọrụ, mana ọ nweghị ihe ọchị. Kemgbe ọtụtụ afọ, etinyewo m oge n'ime ọrụ ahụ ma gbalịsie ike ịkụ ya n'ogige ahụ oge ọ bụla m ga-aga n'ihu ndị folks.
N'ụzọ na-akpali mmasị, mgbe m na-erere onwe m maka ohere ikwu okwu ọhaneze, nkà m na-ekwu okwu enweghị ihe ọ bụla metụtara nkà ahịa m. Bụ onye na-ekwu okwu ọhaneze emeghị ka ị bụrụ onye ahịa mara mma. Bụ oke ahịa anaghị eme gị nnukwu onye na-ekwu okwu ihu ọha (ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịnweta gị ohere ikwu okwu).
O di nwute, enwerem otutu ndi ahia ndi goro ego ọkà okwu iji nyere aka na ahịa ha - mgbe ahụ enwekwara ndakpọ olileanya na nsonaazụ ya. N'ihi gịnị? N'ihi na onye na-ekwu okwu ihu ọha na-ere ire ha, na-ejegharị na mba niile (ma ọ bụ ụwa niile), yana ihe niile ha na-eme bụ maka ebumnuche ịnweta okwu ndị ọzọ. Okwu okwu na-akwụ ụgwọ ha, ọ bụghị ahịa maka ndị ahịa.
Okwu okwu na-akwụ ụgwọ ego ha, ọ bụghị ahịa maka ndị ahịa. Gụnyere ịdọ aka na ntị dị egwu, nchọta ọlaọcha, ma ọ bụ itinye echiche ndị a na-enyochabeghị na-ere ohere ikwu okwu na-esote - mana enwere ike ịre ahịa gị n'ime ala.
Ide ihe banyere Ahịa Apụtaghị na You're Bụ Onye Ahịa
Enweghị m ike ichere ịgbawa akwụkwọ ahịa na-esote nke na-apụta. Oge dị jụụ ejiri nnukwu akwụkwọ ahịa na-agbasa echiche na usoro echiche m. Ọtụtụ mgbe, m na-ahụ onwe m ka m na-agagharị n'echiche ndị ahịa na echiche ndị ọzọ mgbe m na-agụ, na-ala azụ iji hụ ihe m tụfuru ma na-edetu ihe edeturu na mpe mpe akwa n'akụkụ oche ọgụgụ m.
Nke ahụ kwuru, akwụkwọ ahịa na-abụkarị ihe akaebe doro anya nke onye edemede nyere na-ere akwụkwọ. O doro anya, ịsị na ị bụ onye edemede ga-emepe ụzọ maka ire ahịa, ịgba izu, na ohere ikwu okwu. Na, dị ka onye edemede onwe m, enwere m ike ijide gị na ịbụ nnukwu ahịa ga-enyere aka n'ire akwụkwọ. Agbanyeghị, ọ ka na-ere akwụkwọ ma ọ bụghịkwa na ị na-ere nnukwu ahịa.
Enwere ọtụtụ gupụrụ, n'ezie! Ọtụtụ ndị na-ere ahịa dị ka ide na ịkekọrịta ihe ha chọpụtara site na akwụkwọ.
Ndị na-ere ahịa nwere ike ghara ilekọta ụlọ ọrụ dịka nke gị
Enweela m ụfọdụ ndị ahịa dị egwu kemgbe afọ gụnyere Salesforce, GoDaddy, Webtrends, Chase, na - na nso nso a - Dell. Enwere m ike ijide gị ike na nsogbu ndị nnukwu ụlọ ọrụ ahụ nwere dị iche na obere ụlọ ọrụ ndị pere mpe anyị na-arụ ọrụ. Ezie na nnukwu ụlọ ọrụ nwere ike were ọnwa
Nnukwu ụlọ ọrụ nwere ike were ọnwa iji chọpụta olu na ụda nke atụmatụ, ịhazi ihe ndị dị n'ime, yana ịgagharị usoro iwu ma ọ bụ usoro nnabata ndị ọzọ. Ọ bụrụ na anyị na ndị anyị na-ebido rụọ ọrụ ọsọ ahụ na nkụja ahụ, ha agaghị enwe ahịa. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị anyị na ha rụkọrọ ọrụ atụnyego nnukwu mmefu ego na ndị isi nọ na mbara igwe anyị naanị ka ha nwee mmechuihu na nsonaazụ.
Etu ị ga - esi chọta onye ahịa ziri ezi ị nwere ike ịtụkwasị obi
Adịghị m, n'ụzọ ọ bụla, na-atụ aka na ndị ọkà okwu, ndị edemede, na ndị ahịa na-eduga ma na-ekwupụta na ha anaghị enye ndị na-ege ha ntị, ndị na-agụ akwụkwọ, ma ọ bụ ndị ahịa ọ bụla uru. M n'aka na ha na-eme… ọ bụ naanị na ha nwere ike ọ gaghị enye ị uru. Ulo oru abughi otu na onye obula na agughari nke aka ya ahia ahia..
Debe ebumnuche, akụrụngwa na usoro iheomume dị maka ụlọ ọrụ gị wee chọọ ndị ahịa na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị yiri ya ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị nwere aka mgba. O nwere ike iju gị anya na akụ kachasị na ahịa ahịa gị nwere ike ọ gaghị abụ isi okwu nke ogbako na-esote, na-ere akwụkwọ na-esote, ma ọ bụ na-agụ na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Site n'ụzọ… dị ka onye edemede, ọkà okwu, na onye na-ere ahịa… Anaghị ewepu onwe m n'isiokwu a. Enwere m ike ọ gaghị abụ ihe kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ gị, ma!
Tags: Authorsịchọta ahịaesi achọta ahịaakwụkwọ ahịaahia ahiaNa-ekwutụkwasị obiWriting